Nagu saabsan | JiangXi HaiRui Dhirta Dabiiciga ah Co., Ltd.
Dhammaan Webiyada Badda Kujira, Ruixiang Adduunyada
Waxaan aasaasnay ​​2006 oo ku takhasusay soo saarista dhirta dabiiciga ah saliida lagama maarmaanka ah.
Hadda waxaan haysannaa awoodda 2000 t sanadkiiba. Waxaan marwalba taageeri doonnaa fikradda 'Ku noolow tayo sare leh, horumar ku samee sumcad' si aan ugu guuleysano suuqa.
Shirkaddayadu waxay ku taal JingGangShan Aagga Horumarinta Teknolojiyada Sare, magaalada Ji'an, oo caan ku ah 'Town of Spices'It waa meel qurux badan oo ay ka buuxaan waxyaabo ceeriin ah, oo naga dhigaysa mid aad u horumarsan oo xirfad badan.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan leenahay in ka badan noocyo iyo macaamiil adduunka oo dhan. Shabakadayada iibka ee Yurub, Ameerika, Dhexe Eeat iyo Aasiyada Dhexe iwm .Waxaad aad noo soo dhaweyneysa HaiRui .Waxaan ku siin doonnaa adeeg daacad ah, tayo wanaagsan iyo qiimaha ugu wanaagsan. mustaqbalkeena wanaagsan!
Habka Maskaxeed ee Is Beerista
Himilada & Himilada & Qiimayaasha
Tobanka dhaqan ee Hai Rui
Siddeed Maamuus Iyo Siddeed Ceeb Oo Hai Rui
Macno malahan inaan joogo guriga ama shirkadda, waa inaan ixtiraamaa isaga iyo iyada;
Dulqaadka looma dulqaadan karo dadka kale, mana sameyn karaan dadka lugeynaya;
U tanaasul waxa dadka kale aysan bixin karin oo ay aqbalaan waxa dadka kale aysan aqbali karin;
Shaqada kuwa kale waa quruxda guusha;
Dib u eeg khaladkayga aniga oo keli fadhiya, waligaa ha ku hadlin xanta inta aad dadka kale la sheekaysanayso;
Subax ilaa maqrib, fiid ilaa subax hore, noolow, fadhiiso oo jiifso, dhar xidho oo wax cun;
Cibaadada filial, ixtiraamka macalimiinta, daacad ah, aan kala go 'lahayn, mahadsan, daacad ah;
Inaad masuul ka noqoto dadka kale waa inaad is canaanato, oo aad saamaxdo kuwa kale;
Kaliya muuqaal wanaagsan, ma ahan muuqaal xun;
Xitaa haddii horumar jiro, waxaan mar walba dareemaa in beertaydu ay aad u hooseyso, mana ku faano;
Qof walba waa macalin, laakiin anigu waxaan ahay arday. Haddii aan sidan isku kobcin karno, waxaan gaari doonnaa guul weyn!
Himilada: si ay u noqoto shirkad saameyn ku leh warshadaha khudradda Shiinaha!
Hadafka: waxaa ka go'an ku takhasusida, joogtaynta iyo caalamiyeynta warshadaha soo saarista khudradda Shiinaha, oo ku dadaalaya warshadaha soo saarista khudradda Shiinaha ee masraxa adduunka ee nolosha!
Qiimayaasha: marka hore koox, macaamil marka hore, mas'uul ka noqo oo u mahadnaq bulshada
1. Ruux kooxeed
2. Cudur daar shaqo ma leh
3. U shaqeynta howlgalka
4. Ku hogaami tusaale
5. Ku dhaji boostadaada
6. Natiijo u jahaysan
7. Ruuxa xogta dhabta ah
8. In ka badan toban jeer qiimaha
9. Dabka sida xamaasadda oo kale
10. Weligaa ha quusan
Ku faan inaad tahay qof daacad ah oo lagu kalsoonaan karo, oo ku ceebow inaad illowdo caddaaladda faa'iido aawadeed;
Ku faan inaad si dhab ah u feejignaato oo aad feejignaato, kana xishoon inaad badhkood wadnaato;
Ku faan natiijooyinka oo ka xishoon waxqabadka;
Ku faano qaadashada mas'uuliyadda iyo ceebaynta qarinta mas'uuliyadda;
Waa inaan ku faanaa wadaagista furan iyo ceebta isxigxiga;
Wuxuu ku faanaa midnimo iyo walaaltinimo, wuxuuna ka xishoodaa dhagar;
Inaad ku faanto mahadnaq, inaad mahadnaqdo waa ceeb.
Gaadiidka halkan waa mid aad u habboon. Maalgashigeenu waa 18million RMB, oo daboolaya aag dhan 26000 sqm, oo leh warshad casri ah, qalabka tijaabada sare iyo tas-hiilaad tijaabo oo kala duwan
-Jiangxi HaiRui Dhirta Dabiiciga ah Co., Ltd. waa mid ka mid ah soo saarayaasha iyo iibiyaasha ugu waaweyn dalka Shiinaha.
Awoodda Wax Soosaarka